Nahoana ireo Tseky sasany no milaza fa filohan’izy ireo ny filoha voafidin’i Slaovakia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2019 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, Español, Ελληνικά, русский, Esperanto , polski, English
Zuzana Čaputová, filoha voafidy tao Slaovakia tamin'ny 30 Martsa 2019. Sary tamin'ny fampielezan-kevitra, azon'ny fampitam-baovao ampisaina.
Raha nisaraka tamin'ny fomba ofisialy sy tamim-pirahalahiana tamin'ny taona 1993 i Slovakia sy ny Repoblika, dia mbola mifampizara rohy ara-kolontsaina, ara-toekarena sy ara-politika ny fiarahamon'izy ireo — ka miantso an'i Zuzana Čaputová, filoha voafidy tao Slaovakia ho toy ny “filohan'i Tseky” mihitsy ny sasany amin'ny fiarahamonina Tseky.
Voafidy tamin'ny 30 Martsa 2019 i Čaputová, 45 taona, mpisolovava manakaiky ny Vondrona Eoropeana sady mpikatroka, nahazo ny 58 isan-jato tamin'ny fitambaran'ny vato. Raha amin'ny volana Jiona izy no hanomboka hiasa, izy no ho sambany filoha vehivavy ao Slaovakia.
Saingy nahoana no maneho hevitra am-pientanentanana be tamin'ny fandreseny ireo mponina Tseky?
Amin'ny taratasy ary koa amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana ara-toekarena, samy nanana ny lalany ny firenena roa tonta nanomboka ny taona 1993. Niatrika fanamby kokoa tamin'ny fidirana tamin'ny tsena ara-toekarena i Slaovakia, niaritra ny tahan'ny tsy fananan'asa ambony indrindra sy ny taha ambany amin'ny harin-karena anatiny isam-batan'olona raha oharina amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Ary raha nanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taona 2004 ny firenena roa tonta, dia i Slaovakia ihany no nifidy hampihatra ny Euro ho vola ao aminy (tamin'ny taona 2009).
Ny taham-pandrosoana ara-olombelona avo indrindra sy ny fahabetsahan'ny asa tao Tseky no nahasarika ireo Slaovaky mpiasa mpifindramonina, izay ahitana olona maherin'ny 100.000 ankehitriny – iray isanjaton'ny mponina ao Repoblika Tseky ary mihoatra ny 10 isan-jaton'ireo mpiasa vahiny. Noho izany, matetika re any Prague sy any amin'ireo tanàna hafa Tseky ny fiteny Slaovaky, mamoaka fientanana ny fahatsiarovana ny vanim-potoanan'ny tsekôslôvakia raha nanana sata mitovy ofisialy ny fitenin'izy roa tonta ary samy nampiasaina tamin'ny fampianarana sy ny fampitam-baovao.
Miha-betsaka mihitsy aza ny fifandraisana ara-politika. Teraka tany Bratislava, Slaovakia ny praiminisitra ankehitriny ao amin'ny Repoblika Tseky, Andrej Babiš ary raha nianatra tany an-tsekoly sy ny oniversite tany izy, dia niteny Tseky niaraka tamin'ny lantom-peo Slaovaky kely.
Mpandraharaha ambony lasa mpanao politika nampiady hevitra ihany koa izy, ary ahiahiana ho niara-niasa tamin'ireo sampan-draharahan'ny fiarovana komonista tamin'ny lasa – ary manodinkodina ny fampiasam-bolan'ny Vondrona Eoropeana amin'izao fotoana izao.
Mpandala ny nentin-drazana, matetika manohitra an'i Bruxelles, manohitra mivantana ny mpitsoa-ponenana, ary amin'ny ankapobeny manohana ny fifamatorana matanjaka amin'i Moskoa sy Beijing ny fijeriny ara-politika miaraka amin'ny antoko ANO. Manana fandaharam-potoana ara-politika mitovy amin'izany ny filoham-pirenena Tseky, Miloš Zeman, voafidy tamin'ny faramparan'ny taona 2018.
Ny fonon'ny gazetiboky Tseky manazava lahatsoratra momba an'i Zuzana Čaputová miaraka amin'ny lohateny hoe “Ny fahagagana eo ambanin'ny Tendrombohitra Tatra.” Azo ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Koa ny filoha voafidy tao Slaovakia, Zuzana Čaputová kosa mifanohitra amin'izany tanteraka: mpisolovava izy, mpikatroka ny tontolo iainana, mpanohana ny politikan'i Bruxelles sy ny fiarahamonina LGBTQ – ary vehivavy.
Mety manampy amin'ny fanazavana ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra nataon'ny fampitam-baovao Tseky sy ny mpanao politika ambony Tseky tamin'ny vaovao momba ny fandresena tsy nampoizina azon'i Čaputová izany.
Ny 31 martsa, nanasongadina lahatsoratra momba ny fandresen'i Čaputová tamin'ny lohateny hoe “Ny Filoha Tseky Čaputová” ny gazety Tseky liberaly malaza mpivoaka isak'herinandro, Respekt. Nanoratra ny tonian'ny famoahana hoe:
Ny Asabotsy hariva, nijery ny tambajotra sosialy Tseky izy fa voafidy tsy ho filohan'i Slovakia i Zuzana Čaputová fa filohan'i Tseky. Gaga ny olona, indrindra ireo tsy naniry ny fandresen'i Zeman herintaona lasa izay. Azo heverina fa tsontsa, tsy misy dikany ny fankalazana tahaka izany, nefa tsy izany. Nanome fanantenana ho an'ny Repoblika Tseky tokoa i Slaovakia.
Ny fiavahana iray hafa izay niharihary avy hatrany tamin'ireo mpihaino Tseky dia ny fomba fijerin'i Zeman sy Čaputová ny haino aman-jery. Ny Filoha Tseky dia malaza amin'ny fanafihany ny mpanao gazety, raha nanohana mivantana ny fanadihadiana momba ny famonoana ilay mpanao gazety Slaovaky Ján Kuciak kosa i Čaputová.
Niarahaba an'i Čaputová tamin'ny fahombiazany ny mpanao politika rehetra ao amin'ny fitondrana Tseky, anisan'izany ny filoha sy ny praiminisitra. Ankoatra izany, Jiří Pospíšil, lehiben'ny antoko mpanohitra TOP 09, nisioka hoe:
Mino aho fa hitohy ny fifandraisana am-pirahalahiana eo amin'ny firenentsika. Miarahaba an-dRtoa Čaputová izahay ary manantena fa tsy ho ela dia mendrika filoha deraina izay mijery ny hoavy fa tsy vesaran'ny lasa izahay.
Araka ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo amin'ny firenena roa tonta, dia ao amin'ny Repoblika Tseky no hanaovan'i Čaputová ny fitsidihany voalohany ny firenena vahiny.